बराहतालमा १२ करोडको खानेपानी आयोजना – WASHKhabar
Friday, November 27, 2020 425 पटक हेरिएको
सुर्खेत : सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकास्थित वडा नं. ३ र ४ का बासिन्दा लाभान्वित हुनेगरी १२ करोड लागतमा खानेपानी आयोजना निर्माण सुरु भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको तरंगा खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना शिलान्यास गरिएको हो ।
तीनवटा स्किमअन्तर्गत निर्माण गरिने उक्त आयोजनाबाट बराहताल गाउँपालिका–३ का आंशिक र वडा नं. ४ का पूरै घरधुरी लाभान्वित हुनेछन् । आयोजनाबाट ८३४ घरधुरीमा निजी धारा जडान गरिने खानेपानी, सिँंचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयका इन्जिनियर गोपालप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सभा सांसद विष्टले वर्षौंदेखि यस क्षेत्रका बासिन्दाले भोग्दै आएको खानेपानी समस्या यस आयोजनाबाट हल हुने बताउँदै आयोजना समयमै पूरा गर्न आफू लागि पर्ने बताए । यस्तै बराहताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर बस्नेतले आयोजना बनेपछि भेरी नदीको पानी पिउनु पर्ने बाध्यता अन्त्य हुने बताए ।
प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष लगानीमा बन्न लागेको उक्त आयोजना चालू आव ०७७/७८ मा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको इन्जिनियर उपाध्यायले जानकारी दिए । साविकको तरंगा गाविस र हाल बराहताल गाउँपालिका–३ र ४ का बासिन्दाले वर्षौं देखि भेरी नदीको पानी पिउँदै आएका छन् । नजिकै मुहान नहुँदा सानो लगानीमा आयोजना बन्न नसक्ने भएपछि भेरीको पानी पिउन बाध्य यहाँका बासिन्दाले आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।